Fitsidihana ifotony – Valala
Ho famangiana ireo ekipa teknika, dia nanantanteraka fitsidihana ifotony tany amin’ny zone Atsimo ny delegasion izay notarihin’Atoa Tale Jeneraly sy ireo Tale telo mpiara miasa aminy. Izay nontanterahina ny 21 ka hatramin’ny 24 oktobra 2020 lasa teo. Efa fatao matetika izao fitsidihana izao, fa somary niavaka ity indray mitoraka ity satria delegasiona mafonja no tafaraka. Ny Zone Ejeda, Zone Ambovombe ary ny Zone Ampanihy sy ireo Poste vitsivitsy ao aminy no nandalovana.
Nandritra izany no nifampiresahana ny fivoaran’ny valala ao amin’ny zone tsirairay, hita aloha hatreto fa tsy mbola nahitana valala mihitsy ny toerana izay naleha nohon’ny toetr’andro maina dia maina any amin’iny tapany atsimo iny. Nisy ireo Poste vitsivitsy izay ahiana fipoiran’ny valala voalohany nanaovana fitiliana fa tsy nahitana na inona na inonina. Azo lazaina fa tony dia tony ny fivoaran’ny valala amin’izao fotoana izao ary tsy misy atahorana. Na dia eo aza anefa izany, ny paik’ady fitiliana dia tsy mijanona fa mbola mitohy hatrany ary tsy ny aty atsimo ihany fa manerana ny zone rehetra iadidian’ny IFVM eto Madagasikara. Ny ekipa rehetra koa dia efa miomana amin’ny fahavonona raha misy ny fipoirana tampoka.
Nisy ihany koa ny dinika sy tafatafa niarahana tamin’ireo ekipa rehetra ao anatin’ny zone, ny amin’ny fihetsem-pon’izy ireo nohon’ny fahavitan’ny fivadihan’ny marik’araman’ny IFVM ho manaraka ny fanjakana (gille indiciaire). Naneho ny hafaliam’pony ny mpiara miasa rehetra ary indrindra fisaorana ho an’ireo mpitantanana izay tsy nikely aina nikarakara ny fahavitan’izany. Hita soritra tamin’ireo mpiara miasa ihany koa ny fahamboniana moraly sy ny fahazotoana hanantanteraka ny asa. Naneho ny fampirisihana hatrany moa ireo mpitantanana manoloana ny adidy maro mbola miandry ny Foibe.
Réunion CA (Première cession 2020)
Prospection de contrôle